DHAGEYSO Kulan lagu muujinayay qoondada haweenka ee Dastuurka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Kulan lagu muujinayay qoondada haweenka ee Dastuurka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay.
Star FM November 6, 2018
Gudoomiyaha aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shirk gudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen qaybo kala duwan oo looga hadlayay muujinta qoondada Dumarka ee Dastuurka Dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhamaan haweenka Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay inay midnimo muujiyaan hadii ay doonayaan inay helaan xaquuqda Dastuuriga ah ee ay dalkooda ku leeyihiin.
Xildhibaanada Maryan Cariif Qaasim gudoomiyihii hore ee gudiga Dastuurka Baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay qoondadooda helaan inay ka sahlan tahay in qodob arintaas ku saabsan dastuurka lagu daro.
Gudoomiyaha ururka haweenka golaha shacbiga Soomaaliya Xildhibaan Miina Xassan ayaa sheegtay in barnaamijkaan uu sii socon doono labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana ay ka wada shaqaynayaan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka aqalka sare ayaa dhankeeda tilmaamtay in gabdhaha xildhibaanada ah ay ku dadaalayaan sidii ay ku keeni lahaayeen xaquuqda dumarka Soomaaliyeed ee Dastuurkoodu siiyay balse aysan wali si buuxd u wada helin.
Ugu danbayntii gudoomiyaha gudiga Dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Senetor Cabdi Xassan Cawaale Qaybdiid ayaa in haweenka ay masuuliyada kas aaran tahay inay qoondadooda raadsadaan ayagoo midaysan taasna ay u suura galinayso inay dadaalkooda ku guulaystaan.
Kulankaan looga hadlayay muujinta qoondada Dumarka ee Dastuurka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka kala socday wasaarado iyo waaxyo kala oo dowlada ka tirsan sida wasaarada haweenka,Dastuurka,gudiga la socodka Dastuurka,gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka,ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, Ururka haweenka gobolka Banaadir iyo masuuliyiin kale waxaana lagu wadaa in shirkaan qaybtiisa kale bisha danbe la qabto.
← DHAGEYSO: warka subaxnimo ee idaacada star fm 8:00 PM
DHAGEYSO: Beeralayda Galeeyda oo diiday qiimo ay dowladu shaacisay →